Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း)
Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
လည်ချောင်းအနောက်ပိုင်းမှာ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရှိနေတဲ့ ဘဲဥပုံတစ်သျှူးလေးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ အာသီးရောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။
Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အလွန်ကိုအဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အချက်တွေကိုရှောင်ခြင်းဖြင့် လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အာသီးပေါ်တွင်အဖြူရောင်၊ အဝါရောင် အကွက်များပေါ်ခြင်း
အသံဝင်ခြင်း၊ ပျောက်ခြင်း၊ ပြောင်းခြင်း
ဗိုက်အောင့်ခြင်း (များသောအားဖြင့် ကလေးများတွင်)
ခံစားမှုတွေ၊ လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြတတ်သေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေမှာဆိုရင်တော့
နောက်ထပ်လက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်သေးတာကြောင့် အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆရာဝန်နဲ့မေးမြန်းတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်
တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်း လည်ချောင်းနာခြင်းမသက်သာပါက
Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အဖြစ်များပြီး ဘတ်တီးရီးယားတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များဆုံးဘတ်တီးရီးယားကတော့ Streptococcus pyogenes (group A streptococcus) ဖြစ်ပြီး တခြားဘတ်တီးရီးယားတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
အာသီးတွေဟာ ဝင်လာတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ပထမဆုံးကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးတဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေအဖြစ်များခြင်းဖြစ်တယ။် ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အာသီးလုပ်ဆောင်မှုကျသွားတာကြောင့် လူကြီးတွေမှာ အာသီးရောင်ခြင်းအဖြစ်နည်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသက်ငယ်ခြင်း- ကလေးငယ်တွေမှာအဖြစ်များတယ်၊ ၂ နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာတော့ ဖြစ်ခဲပါတယ်။
အသက် ၅ နှစ်နဲ့ ၁၅ နှစ်ကြား ကလေးတွေမှာ ဘတ်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အာသီးရောင်ခြင်းကတော့ ပိုငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ပိုးမွှားနှင့်အထိအတွေ့များခြင်း- ကျောင်းနေအရွယ်တွေမှာ ပိုးမွှားတွေနဲ့ ထိတွေ့နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ပိုးဝင်နိုင်တဲ့ အာခေါင်၊ နား၊ နှာခေါင်းတို့ကို ဓါတ်မီးနဲ့ထိုးကြည့်ပါမယ်။
တခါတလေ အာသီးရောင်ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတတ်တဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ အနာများ၊ အဖုများစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
Throat swab: လည်ချောင်းအနောက်ဖက်ကို ပိုးသန့်ထားသော ဂွမ်းစဖြင့် သုတ်ပြီး အရည်နမူနာယူထားပါတယ်။ ထိုနမူနာကိုဆေးခန်း သို့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ပိုးစစ်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ဆေးခန်းတွေမှာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အဖြေသိရနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်ပိုတိကျမယ့် စစ်ဆေးမှုအတွက်တော့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစစ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဆေးခန်းမှာပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်တော့ ဘတ်တီးရီးယားဖြစ်နိုင်ပြီး မရှိပါက ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုတိကျတဲ့အဖြေအတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းအဖြေကိုစောင့်နိုင်ပါတယ်။
CBC- သွေးစစ်ဆေးမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သွေးဆဲလ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ်။ မည်သည့်ဆဲလ်တက်နေသည်၊ ကျနေသည် ကိုစစ်ဆေးပြီး ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးသိရှိခြင်းဖြစ်တယ်။
CBC ကို များသောအားဖြင့်စစ်ဆေးရန်မလိုပဲ၊ ပထမစစ်ဆေးမှု negative ဖြစ်ပြီး strep ဘတ်တီးရီးယားမတွေ့ပါက စစ်ရန်လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။
Amygdalitis (အာသီရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဘတ်တီးရီးယားဖြစ်စေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်စေ အိမ်တွင် စနစ်တကျပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းက သင့်ကလေးကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး အမြန်ပြန်ကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပါက ထိုပြုစုမှုကအဓိကကုသမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဆရာဝန်က ပဋိဇီဝဆေးညွှန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပတ် ဆယ်ရက် အတွင်းမှာပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဘတ်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ပါက ပဋိဇီဝဆေးညွှန်းမည်ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် group A streptococcus အတွက် ပန်နဆလင် ၁၀ ရက်ခန့်သောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ပန်နဆလင်နှင့် ဆေးမတည့်ပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ၊ ဆရာဝန်ကတခြားဆေးညွှန်းပါလိမ့်မယ်။
လက္ခဏာတွေပျောက်သွားပါကလည်း ဆေးကိုညွှန်းသည့်အတိုင်း ကုန်အောင်သောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ ညွှန်သည့်အတိုင်းမသောက်ပါက ရောဂါပိုဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပျံ့သွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြတ်အောင်မသောက်ခြင်းဟာ အဆစ်ရောင်ဖျားနာခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်းတို့ထိ ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ချိန်ကျော်သွားပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်ရွက်ရမည်ကို ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူတို့နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပါ
မကြာခဏအာသီးရောင်နေလျှင်၊ အချိန်ကြာအာသီးရောင်လျှင်၊ ပဋိဇီဝဆေးကို မတုံ့ပြန်သော ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် အာသီးရောင်ခြင်းဖြစ်လျှင် ခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ပစ်လို့ရပါတယ်။ မကြာခဏအာသီးရောင်ခြင်းဆိုတာ-
တကယ်လို့အာသီးရောင်ခြင်းကြောင့် အောက်ပါပြဿနာများဖြစ်လာပါကလည်း ခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ပစ်သင့်ပါတယ်-
မျိုရခက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်အသားနှင့် အရွယ်ကြီးသောအစာများ
ကလေးကငယ်ရွယ်လွန်းခြင်း၊ ခွဲစိတ်စဉ်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိခြင်းမှ လွဲလျှင် ခွဲစိတ်ပြီးလျှင်ပြီးချင်း ထိုနေ့မှာပဲအိမ်ပြန်လို့ရပါတယ်။ လုံးဝအရှင်းပျောက်ကင်းဖို့ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်ခန့် ကြာပါတယ်
အရည်များများသောက်ပါ၊ လည်ချောင်းစိုစွတ်နေစေရန်နှင့် ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ရန် ရေများများသောက်ပါစေ
နူးညံ့သောအစားအစာ၊ အရည်များကျွေးပါ။ လည်ချောင်းသက်သာစေရန် ကြက်ပြုတ်ရည်၊ ကဖိန်းမပါသောလက်ဖက်ရည်နွေးနွေး၊ ပျားရည်ပါသောရေနွေး ကဲ့သို့ နွေးသောအရည်များ၊ ရေခဲချောင်းကဲ့သို့ အအေးစာများ ကျွေးပါ။
ဆားရည်နွေးဖြင့်ပါးလုပ်ကျင်းပါစေ။ ပါးလုပ်ကျင်းတက်သောအရွယ်ဖြစ်ပါက ဆားစားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်း ( ၅ မီလီလီတာခန့်) နှင့် ရေနွေး ၈ အောင်စခန့်ဖျော်ကာ ပါးလုပ်ကျင်းခိုင်းပါ။
လေသန့်ပါစေ။ လေသန့်စက်ဖြင့် လေသန့်စေခြင်းဖြင့် လည်ချောင်းယားယံစေသော အမှုန်များကင်းဝေးစေနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် ရေနွေးစိမ်ခိုင်းပါ။
အသက် ၄ နှစ်နဲ့အထက်ကလေးများအတွက် ငုံဆေးပြားငုံခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
လည်ချောင်းယားစေမည့်အရာများ ရှောင်ပါ။ အိမ်တွင်းဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေလုပ်သော ပစ္စည်းများ။
နာကျင်မှုနဲ့ အဖျားအတွက် ဆေးသောက်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ibuprofen (Advil, Children’s Motrin, others) or acetaminophen (Tylenol, others) စသည်တို့ဖြင့် အဖျားနဲ့ လည်ချောင်းနာခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အဖျားငွေ့ငွေ့ဖြစ်ပါက ဆေးမသောက်လည်းရပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေတချို့မှလွဲပြီး ကလေးငယ်များနဲ့ ဆယ်ကျောက်သက်အရွယ်ဟာ aspirin မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဖြစ်လေ့မရှိပေမယ့် Reye’s ရောဂါနဲ့ဆက်နွယ်တက်ပြီး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။
သိလိုသည်များရှိပါက သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေရရန် ဆရာဝန်နဲ့သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 1, 2017
1. Tonsillitis: Diagnosis, Symptoms, and Treatment. http://www.medicalnewstoday.com/articles/156497.php. Accessed 20 Dec, 2016
2. Tonsillitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tonsillitis/basics/definition/con-20023538. Accessed 20 Dec 2016
Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) (Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH))
Mirizzi syndrome (Mirizzi syndro)
သားဥအိမ်ကင်ဆာက ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဘယ်လိုစီမံမလဲ။
မိမိကလေး တကယ်ပဲ နေမကောင်းဖြစ်သလား
Endoscopic Sinus Surgery (နှာခေါင်းတွင်းလေအိတ်ခေါင်းများအား မှန်ပြောင်းဖြင့် ခွဲစိတ်ခြင်း)
Tonsil Cancer (အာသီးကင်ဆာရောဂါ)
Pharyngomycosis (လည်ချောင်းမှိုစွဲရောင် ရောဂါ)